Gocha seenaa badde deebisuu, Adaamaatti raawwatame
Gocha seenaa badde deebisuu, Adaamaatti raawwatame Featured
Sirnoota darban keessa hacuuccaafi sarbamuun eenyummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa ture dhala namaa qofarratti kan daangahe hinturre. Hacuuccaan maqaa magaalotaa jijjiiruu, duudhaa, seenaafi afaanirrattis xiyyeeffate sirnoota kanneeniin raawwatameera.
Biyyattiitti nama dabalatee maqaa magaalotaafi iddoowwanii saboonni duudhaa, aadaa safuu ilaalcha keessa galchuun moggaafatan dhabamsiisuun akka gocha gaariitti qabatamee raawwatamaa tureera.
Waanti gaariifi seena qabeessi dhiyeenya kana Magaalaa Adaamaatti raawwatame garuu fakkeenyummaan kan eeramuudha.
Magaalattiin maqaashii dur irraa mulqamee ture sirnuma kana keessa kan deebifatte yoo ta'u Adaamaan kutaalee magaalaa, gandoota, daandiiwwaniifi addababayiif maqaa Oromoon ittiin waamaa ture deebisuudhaan gochi seena qabeessi raawwatameera.
Ogeettiin Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa, Aadde Maartaa Gammachuu dhimmicha ilaalchisuun Gaazexaa Bariisaatti akka himanitti, magaalattiin kutaalee magaalaa jaha jechuunis Boolee, Abbaa Gadaa, Lugoo, Dambalaa, Bokkuufi Daabee jedhamuun moggaafamteetti.
Gandoota 14 duraan lakkoofsaan waamamaa turaniifis duudhaa ganamaarratti hundaa'uun maqaan Gooroo, Migira, Gaara Luboo, Dhaddacha Araaraa, Dagaagaafi kkfn kan mogga'eera.
Ittigaafatamaan Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa, Obbo Mi'eessaa Elemaas, seenaafi aadaa ummata Oromoo bu'uura godhachuun moggaasni maqaa addababayiiwwanii, daandii, kutaalee magaalaafi gandootaa geggeeffamuu eeru.
Maqaa gootota Oromoo qabsoo Oromoo bakka guddaan gahuuf wareegama guddaa kanfalaniitiin daandiifi addababayiin moggaafameera jedhu.
Kunis wareegama kanfalameef beekamtii kennuufi dhaloonni haaraan wareegama kanfalamerraa gootummaa barri kun barbaadu dhaalee Oromoofi Oromiyaa gara fuulduraatti akka tarkaanfachiisu yaadamee kan raawwatameedha.
Haaluma kanaan karaa guddaan Finfinnee kaasee gara bahaatti magaalattii qaxxaamuru Daandii Abbaa Gadaa, addababayiin Maayaa jedhamaa ture Addababayii Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu, karaan gara Wanjii geessu Daandii Atileet Waamii Birraatuu, kan gara Asallaa Geessuufi Tiqur Abbaay jedhamaa ture Daandii Dhibbaalaa Maammoo Mazaxamir, akkasumas addababayonni biroon maqaa Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Abdiisaa Aagaatiin, daandiiwwann biroon Elemoo Qilxuu, Doktara Kabajaa Artisti Alii Birraa, Karrayyuufi Siinqee jedhaman moggaafamaniiru.
Daandii haaraan magaalattiitti ijaarame maqaa Pirezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa duraanii, Obbo Alamaayyoo Atoomsaatiin mogga'eera.
Moggaasichi namoota lubbuudhaan jiraniifi hinjirre kan of keessaa qabu yoo ta'u, kunis warra lubbuudhaan jiraniif yaadannoo, kanneen gootota wareegamaniif seenaa akkasumas dhaloota haaraadhaaf amaanaadha jedhamee qabame. Daandiileefi addababayonni moggaafaman kunniin daandii Abbaa Gadaarratti waliti deebi'u.
Kunis kan agarsiisu gama tokkoon hojiilee misoomaa karaa biraatiin ammoo eenyummaa dagatame deebisuuf qindoomina jiru kan agarsiisuudha. Sosochiin kun gara fuulduraattis cimee kan ittifuu qaba. Daandiin Karrayyuufi Siinqee jedhus moggaafameera.
Walumaagalatti hojiin seenaa badde bakkatti deebisuu Magaalaa Adaamaatti eegalame daran kan nama boonsisuudha. Moggaasa kana maddiitti magaalattiin wiirtuu aadaafi duudhaan Oromoo daran keessatti calaqqisu akka taatuuf ammas xiyyeeffannaan hojjechuu barbaachisa. Magaalonni naannichaa biroonis gocha Adaamaa fakkeenyummaan fudhachuu qabu.
Torban kana/This_Week 43571
Guyyaa mara/All_Days 1468351